Budata Beechcraft AT-11 Kansan FSX & P3D - Rikoooo
Onye edemede: Milton Shupe, Scott Thomas, Damian Radice, na ụda site na Nigel Richards
Ọzọkwa, Milton Shupe na ndị otu ya nyere anyị ihe atụ mara mma nke obodo anyị FSX / P3D. Dakọtara na Prepar3D v4. Gụnyere ihe ndozi 10, ụda olu omenala, ụlọ 3D zuru ezu na ndị ọzọ. Ihe ngwugwu a nwere ụdị 4 (turret, afụ nke na-ahụ anya, caped turret, na ibu ndi nkịtị)
AT-11 bụ ọkọlọtọ ndị agha bọmbụ na United States nke Agha Ụwa nke Abụọ; Banyere 90 percent nke karịa 45,000 USAAF bombardiers zụrụ azụ na AT-11s.